Wiricheya Zvishongedzo: Kutakurwa
Kutenga a wiricheya mazuva ano anenge akafanana nekutenga mota. Iwe une zvako zvakakosha mavhiripu vasina “mafirita” vanogona kuita mabasa avo nemazvo. Ipapo une iyo "yakatakurwa" mavhiripu izvo zvinouya nezvimwe zvakasiyana siyana zvinowedzera zvakanyanya kunyaradzo uye nyore kweiyo wiricheya mushandisi.
Izvo zvinonyanya kufarirwa zvinhu zvekunyaradza ndizvo chigaro pamutsago. Kana ikanyatsogadzirwa uye kuvakwa inogona kuwedzera kunyaradzo yemushandisi, asi kana isina kunyatsogadzirwa inogona kutungamira mukumira kwakashata uye inogona kutokonzeresa nemaronda ekudzvinyirira.
Chakanaka wiricheya chigaro pamutsago inokurudzira mushandisi kuti agare nemamiriro akafanira ekumira, izvo zvakakosha kune avo vane chinetso chekumedza kana vane hurema hwemitsipa. Mamiriro akakodzera anobatsirawo pamwe nekufema uye kutenderera; saka, yakanyatsogadzirwa wiricheya chigaro pamutsago uchave nehuwandu hwezvakanaka zvinobatsira.
Ramp uye Anosimudza
Kunyangwe hazvo zvivakwa zveruzhinji zviri wiricheya kufambidzana, kuchine zvivakwa zvinoverengeka zvisina kugadziridzwa uye dzimba shoma kwazvo dzinokwanisa kugara a wiricheya. Zvishandiso senge inotakurika wiricheya ramp tendera wiricheya vashandisi kuwana zvivakwa zvaimbove zvisingawanikwe. Inotakurika wiricheya Ramp akakwana kuwana wiricheya vashandisi mukati uye kunze kwemotokari uye kumusoro.
A wiricheya lift yakashanda zvakanyanya kunge elevator uye inoshandiswa kutakura mavhiripu kubva pane imwe pasi kuenda kune inotevera muchivako kana pamba. Aya hydraulic wiricheya accessories Chibvumirano wiricheya vashandisi kuve nhare kunyange mukubuda kwesimba. Vanodhura zvakaderera zvakanyanya pane anosimudzwa nemagetsi kusimudzwa uye vanoita basa racho futi. Simba rechipiri rinodiwa kuti rirambe richishanda panguva yemagetsi. Zvimwe wiricheya zvishandiso zvinobatsira nekutora vashandisi kubva kune imwe nhanho kuenda kune inotevera senge masitepisi ekusimudza uye kukwidza mota.
Kunyangwe Ramp uye malifts anouya akasiyana maumbirwo uye saizi, pane zvimwe wiricheya zvishandiso zvinokubatsira iwe kugadzirisa yako wiricheya kukodzera zvaunoda. Imwe yezvishongedzo zvakadaro ndeye wiricheya kuzvidzora, iyo inoshandiswa kuchengeta iyo wiricheya munzvimbo yakachengeteka kana uchityaira mumotokari. wiricheya makomo ekugadzirisa lap yepamusoro kana zvimwe zvinhu chimwezve chinhu chinobatsira. Zvimwe zvekuwedzera zvinosanganisira zvinogadziriswa zvinodzorwa zvinogona kuitiswa neruoko kana izwi uye wiricheya kukiya kana kuvhara.
Zvishandiso zvinobatsira kusimudzira mwero wekunyaradza wemushandisi zvinosanganisira magurovhosi, mutsipa uye misoro yemisoro, makushoni kumashure, padding rekudzivirira remaoko, gokora nemakumbo. Kune akati wandei wiricheya zvishongedzo zvinopa nyaradzo, nyore uye chengetedzo kune wiricheya vashandisi. Ingo tsvaga izvo zvinonyanya kubatsira kwauri uye zvinokutendera kuti unakirwe kushandisa dzako wiricheya.